Izindlu zokuhlunga zezikhwama eziningi ze-BM - Umhlinzeki wezezindlu wesihlungi we-BM BM wezimoto eziningi, i-Factory -Sffiltech
Izindlu zokuhlunga ngezikhwama eziningi ze-BM
izimbaza uvuleke uhlobo lokuhlobisa izikhwama zezindlu eziningi - uchungechunge lweBM
- BM chungechunge ama-mussels evulekile Uhlobo lokuhlobisa izikhwama zezindlu lwakhiwa ngesisekelo sendawo evulekile yokuhlunga yesikhwama, efanelekile ukucubungula zonke izinhlobo ze-acid ne-alkali ketshezi, i-solvent nazo zonke izinhlobo zoketshezi olungathathi hlangothi. Izicucu zemoto yochungechunge iBM zohlobo oluvulekile lwezindlu ezixubile isetshenziselwa ukuqinisa umzimba wesembozo, futhi ingcindezi iphakeme. Nge-flange kanye ne-seal yokufakelwa kanye nedivayisi ecindezelayo yamaphuzu amathathu ahlukile ukufaka isikhwama esisheshayo, gwema ukuvuza okuvela eceleni, ikhava ephezulu isebenzisa inqubo yokuvula yokusiza yasentwasahlobo, futhi ingaba kunoma iyiphi i-angle.
Kusetshenziswa imininingwane ebekiwe ebangeni eliphakeme ukuqinisekisa ukugqwala okwanele nokuthembeka okuphezulu;
Ilungele ukuhlunga kokugeleza okukhulu, ingamukela ukungcola okuningi, futhi efaneleke isikhathi eside ukufaka okunye isikhwama sokuhlunga somcimbi;
Ungakhetha ubukhulu be-01, 02 besikhwama sokuhlunga noma isihlungi;
Ukwakheka kwe-bolt wamehlo, ukusebenza okusebenzayo, ukonga kanye nokusebenza;
Umklamo ocacile wendlela yokuvula yokusiza, ukuze inqubo yokuvula ibe lula nomzamo, isandla esisodwa ukuqeda ukusebenza;
Ukukhethwa kohlobo lwekhwalithi ephezulu ye-0 elastomer ring, ukusebenza kahle kokubopha nokuphila kwophawu;
amamodeli ayisishiyagalombili, ngokulandelana, izikhwama ezintathu, izikhwama ezine, izikhwama ezinhlanu, izikhwama eziyisithupha, izikhwama eziyisishiyagalombili, izikhwama eziyishumi nambili, izikhwama eziyishumi nesikhombisa, izikhwama ezingamashumi amabili nantathu.
izindlu zensimbi ezingenasici
Ukusuka ezingxenyeni eziya emikhiqizweni yethu eqediwe, sizame konke okusemandleni ukulawula ikhwalithi, ngithanda ukuthi ube yisitshalo sethu ukusivakashela izindlu zokuhlunga zamanzi zensimbi engenasici.
Imikhiqizo ekhiqiza sisebenzisa imishini engcono kakhulu yokwenza indlu yethu yokuhlunga yensimbi engenasici
insimbi engenasici yokuhluza izindlu zokuhlola indawo yokusebenzela
insimbi engagqwali yamanzi yokuhlunga yezindlu uketshezi lwezindawo ezenza umasifundi
imininingwane yensimbi engenasici yamanzi yensimbi engenacala